Inqolobane - Indlwana esepulazini eceleni kwamahhashi - I-Airbnb
Inqolobane - Indlwana esepulazini eceleni kwamahhashi
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Jyotdeep ( Sheena)
U-Jyotdeep ( Sheena) Ungumbungazi ovelele
Indlwana enamahhashi epulazini elingama-acre angu-2 iyinhlanganisela ekahle kakhulu yokuhlobisa kwasemaphandleni nokunethezeka nokubukeka okuhle kwezitebele kanye notshani obuvulekile obuzungezwe isundu, i-ashoka, i-frangipani nezihlahla ze-ficus okwenza kube indawo ekahle kakhulu yokushaywa wumoya. Ukugibela amahhashi, ukuvakashela izitebele, ukuhamba ngezinyawo ngamahhashi, imililo & izindawo zokosa inyama, ikamelo labantu abathandanayo, ipulazi elithokomele lomndeni & indawo ekahle yokubungaza ndawonye, evame ukuvakashelwa ngamapikoko: inqolobane iyigugu elifihlekile & okokuzithokozisa okuyingqayizivele.
Inqolobane isethwe phakathi kweningizimu ye-delhi 's prime, indawo eluhlaza okotshani & ixhunywe kahle kakhulu nezinxanxathela zezitolo, izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela, amashalofu kanye nesayithi yamagugu efana ne-Qwagen Minar. Indlu yayo eluhlaza & ehlanzekile, engajwayelekile, enethezekile. Akukwazanga ukuba ngcono kubantu abashadile abafuna ukuvakasha kwezithandani okuhamba phambili. Akuyona nje ingxenye yendawo yokuhlala kodwa okokuzithokozisa, inqolobane iyizwe layo.
Inqolobane itholakala ngaphakathi kwepulazi elihle elibizwa ngokuthi i- osho drive engumakhelwane ne-SHA Foundation edumile, isikhungo esingokomoya se-yoga nokuzindla. Isendaweni eqhele ngemizuzu engu-10 ezindaweni zokudlela ezidumile ezifana ne-Tonino, i-Karims, izitolo zekhofi ze-Feng Shui ezifana ne-Barista, inkundla yokudla egcwele, indawo yokuzivocavoca, isaluni. Inqolobane ingamaminithi angu-20 ukusuka ezinxanxatheleni zezitolo ezidumile ezifana ne-DLF promenade, i-Emporio & Ambience e-Vasant kunj kanye ne-Select city walk & DLF Place e-Saket ngayinye yazo yizindawo ezivelele e-New Delhi. Futhi cishe yimizuzu engu-20 ukusuka e-Hubble Hub, Gurgaon.
Ibungazwe ngu-Jyotdeep ( Sheena)
Sithanda ukubingelela nokwamukela izivakashi zethu nakuba sithanda ukuzinikeza ubumfihlo & indawo ephelele. Noma kunjalo, Sitholakala ngemiyalezo kanye nezingcingo ngaso sonke isikhathi.
UJyotdeep ( Sheena) Ungumbungazi ovelele